Ciidamada degdega ah ee Bariga Afrika oo dhawaan diyaar noqonaya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Dowladaha bariga Africa, ayaa sheegay in bisha December ee sanadkan ay diyaar noqon doonaan ciidamo ka kooban 5 kun oo askari oo si degdeg ah uga jawaabi karo khilaafyada ka dhaca gudaha dalalka bariga Africa.
Taliyaha ciidamada gurmadka degdegga ee dalka Uganda Maj. Gen. Francis Okello, ayaa sheegay in ciidamadaan ahaan doonaan kuwo awood leh, oo isticmaalaya tangiyo iyo noocyada kale ee hubka, ayna diyaar noqonayaan sanad ka hor wakhtiga ururka midowga Africa uu u qabtay gobolada qaaradda in ay dhistaan ciidamo gurmadka deg degga ah.
Ciidamadaan la diyaarinayo, ayaa ka kala imaanaya dalalka Uganda, Soomaaliya, Rwanda, Kenya, Burundi, Sudan Ethiopia, Djibouti, Seychelles iyo jasaiiradda Comoros.
Taliyaasha ciidamada dalalka bariga Africa, ayaa qabtay tababaro xiriir ah oo lagu kobcinayo awoodda ciidamada, booliska iyo waaxda rayidka tan iyo markii dalalka bariga Africa billaabeen dhismaha ciidanka gurmaddka degdegga ee bariga Africa.
Maj. Gen Okello, ayaa sheegay in haddii ciidamadaan ay xilli hore diyaar ahaan lahaayeen loo isticmaali lahaa ka hortagga colaadaha Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan, wuxuuse sheegay in fikirka dhismaha ciidankaan uu weli yahay mid wax tar leh.
Dhanka kale, In ka badan boqol askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, ayaa shalay tababar ciidan oo qaatay muddo toban bil ah loogu soo gabagabeeyey magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga.
Taliyaha dugsiga tababarka ciidamada Lugta ee dalkaasi Turkiga, Col Nihat Aksut, ayaa sheegay in ciidamada, oo tiradooda ay dhan tahay 110 askari, ay u dhameystireen dhammaan waxyaabaha aasaasiga u ah ciidan qaranka, lana baray daruus aad u badan.
Nihat Askut wuxuu sheegay in ciidanka ay qayb weyn ka qaadan doonaan isku xirka iyo xiriirka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Turkiga, wuxuuna ciidanka dhameystay tababarka u qaybiyey shahaadooyin iyo biladaha ciidamada.
Safiirka Soomaaliya u qaabilsan Turkiga Mohamed Mursal Sheikh Abdirahman, oo munaasabadda qalan jabinta ciidanka ka hadlay, ayaa ka codsaday ciidamada in ay gacan weyn ka geystaan sidii dalka ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa.
Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga, ayaa kal hore kala saxiixday heshiiyo lagu hormarinayo xiriirka ciidamada qalabka sida ee labada dal iyo qorshe Turkiga uu ku tababarayo ciidamada Soomaaliya.
RW Cabdi Weli oo Sacuudiga ka codsaday inuusan dhaawicin ganacsiga xoolaha Soomaaliya